LỌỌR:: ọgwụ ọgwụ na-agbanwe agbanwe bụ eziokwu! Nwoke dị afọ nke 80 loro mgbe mbụ ọ nwesịrị ule anụmanụ: Martin Vrijland
LỌỌR:: ọgwụ ọgwụ na-agbanwe agbanwe bụ eziokwu! Nwoke dị afọ 80 loro mgbe mbụ ulere anụmanụ
gbara akwụkwọ IHE SIM, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 August 2019	• 1 Comment
David Sinclair bụ prọfesọ na ngalaba mkpụrụ ndụ ihe nketa, Blavatnik Institute na onye njikwa nke Paul F. Glenn Center maka usoro ọmụmụ ihe banyere ndụ nke ịka nká na Harvard Medical School. N’ihe ngosi dị n’okpuru ebe a, ọ kọwara otú usoro ịka nká nke ahụ mmadụ si metụta ọnwụ nke ozi; enwere ike iji ya tụnyere ozi na-emebi emebi na teeti magnet nke teepu cassette ochie, ka ọgbọ ochie si mara ya. Otu ihe a na-eme na ozi dijitalụ na ịntanetị, mana n'ihi na e zitere koodu njikwa na-achọpụta ma ozi ahụ erutela ma ọ bụ na ọ ga-ewe iwe, ịnwere ike ibugharị mpempe ozi ahụ ma ọ bụrụ na enwere data data ọ bụla.
Usoro ịka nká bụkwa ihe niile gbasara mfu nke koodu na DNA. Site na idoghasị "ihe ndị a na CD", ị nwere ike weghachite ozi ahụ. Site na itinye ‘onye na-ahụ ihe’, nke a ga-eweghachite ozi niile dị na DNA dịka a ga-asị na ọ furu efu, ị nwere ike nweta usoro a. Nke mbu nwalere onye ‘na-ekiri ihe a n’oku n’uzo n’enweghi ihe putara n’inweta usoro ịka nkenke n’agba iji nweta ezi koodu. Agbanyeghị, onye tụgharịrị mechara bụrụ ihe kpatara ya: enwere ike weghachite koodu DNA furu efu na ụmụ oke ndị ahụ na-atụgharị.
N'ihe ngosi nke David Sinclair n'okpuru ị ga-enweta nkọwa zuru ezu banyere ihe ndị a niile. Otu ihe dị ịtụnanya bụ na nna nna ya gbara afọ asatọ kpebiri na ya chọrọ nwalee ụdị ọgwụ a. Nsonaazụ ahụ esighi ike n'oge dị mkpirikpi, mana o nwere ike ịkwụsị ịka nká nna nna ya ma ọ dị ka ọ dị ya ka ọ ka mkpa. Ihe ndị a niile bụ akụkọ dị ịtụnanya maka transhumanists ma ọ bụrụ na nchọpụta a na-abịa site na nnwale ụlọ ọgwụ, ụdị azụmahịa dị oke ọnụ ga-erute n'ahịa n'oge na-adịghị anya. Enwere ike ịkọ ya na pill a nwere ike ịbara ndị ọgaranya ma ama ama, ọ bụrụ na ọ bụ naanị n'ihi na ị ga-ebi ogologo ndụ na ya mere ị chọkwuru ego iji debe ya. Ebumnuche kachasị nke transhumanists bụ n'ezie anwụghị anwụ.
Ideringtụle bayoloji na DNA dị ka ebe nchekwa data dị na dijitalụ a na-eme ka o kwe omume ịghọta ọrụ nke koodu ahụ niile. Ke akpa ileba anya, usoro a ga - akwụsị na ịgbaghari ịka nká yie ihe dị egwu, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi ọtụtụ nsogbu. Kedu ihe ọ ga - apụta maka ego ezumike nka, maka ọnụ ọgụgụ ụwa na - abawanye ụba, nri, ụtụ gburugburu, wdg? Ihe ịrụ ụka adịghị ya na a ga-echepụta azịza maka nke a, mana enwere nchegbu ka ukwuu. Nchegbu ahụ kachasị bụ na site na ịdepụta ọrụ niile nke koodu ọ bụla na DNA anyị, anyị na-abịaru nso ugbu a na enwere ike ịgbagọkarị mmadụ. Ọbụghị naanị Elon Musk ụbụrụ na-ahụ maka ụzọ (lee ebe a), mana ịwụnye netwọkụ 5G na (site na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa) na-enye enzyme ụgbọ ala maka CRISPR dị ka ịgụ na ide ọrụ n'ime ahụ, anyị na-abịaru nso ugbu a na echiche anyị na DNA anyị. enwere ike ịgụ ma degharịa ya na ntanetị. Yabụ na anyị abịaru nso na anwụghị anwụ, mana anyị na-abịaru nso na mgbanwe maka ndị gam akporo. Anọwo m na-eche mgbe niile ihe kpatara sistemụ arụmọrụ na smartphones ndị ahụ sitere na Samsung, Huawei na ihe ndị yiri ya, nwere aha 'gam akporo'. Anyị amata ebumnuche njedebe dị ogologo na nke a? anyị na-amata usoro dị ogologo ebe a?
isi mmalite: maxvandaag.nl
Ihe omume telivishọn dị ka nke Jan Mulder, onye banyere ndụ ebighi ebi, dị ka ọ nwere ike ịkwadebe ndị mmadụ maka ihe ndị na-abịa. Anyị na-enweta soseji, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na anyị chọrọ ịmịkpọ. Onye na-achọghị ịdị ndụ ebighị ebi!
Chere obere oge! Nkwa ahụ nke "ndụ ebighi ebi" adịghị eme ka ị chee ihe ọ bụla? Nke a obughi ihe okpukpere kwere anyi nkwa? Ọ dị mma, ọ na-abịa ugbu a. Enwere m ike iche n'echiche na nkwa nke Mesaịa si 'igwe ojii' dabara nke ọma na foto nke transhumanism. N’ezie: ọ bụrụ n’echiche nke ụbụrụ Elon Musk bụ eziokwu, anyị nwere ike inweta “eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ” site na njikọ igwe ojii ahụ, n’ihi na egwuregwu ndị dị site n’oge ahụ ga-adị oke elu nke na nghọta niile nwere na ụbụrụ anyị n’echiche. na-akpali. Ọ bụrụ na idegharị mkpụrụ ndụ anyị na igwe ojii na-eme ka o kwe omume ime ka ahụ ghara ịnwụ anwụ, Mesaịa si n'igwe ojii nwere ike inye anyị ahụ ọhụrụ. Ndị nwụrụ anwụ nwedịrị ike ibili ma ọ bụrụ na ozi DNA ha ka nọ n’ili, ebe anyị na-anwa ime ka anụmanụ ndị dị ka Mammot dịghachi ndụ taa.
Agbanyeghị, ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ karịa. Ndi Hardh transhumanists achoro ka anyi mee nke oma banyere uwa a ma jiko ya kpuchie ya (site na akwukwo?). Nke ahụ ga-eweta ọtụtụ uru. Iji maa atụ, don'tchọghị ihe ndị siri ike dị ka rọketi na mmanụ ụgbọ ala iji fega na Mars. Ikwesighi ikwugharị ikuku nke Mars ma ọ bụ mbara ala ndị ọzọ. Just na-ewu igwe dijitalụ nke edoghị anya na ndụ n'ezie. Onye isi Google, onye na-echepụta ihe na onye ọkà ihe ọmụma kwuru amụma oge a nke dị n'etiti mmadụ na AI. ray Kurzweil. Ọ na - akpọ oge a 'otu ọnọdụ' ma na - atụ anya na njikọ a n'etiti ụmụ mmadụ na AI na 2045. Na isiokwu a Akọwaara m ha n'ụzọ zuru ezu na ozi a dị mkpa na anyị na-ejikwa 'nnomi nke ihe dịbu'. Ọ ga-adị mma ma ị gụọ akwụkwọ ahụ nke ọma usoro isiokwu a nile ghaa lanụ. Gịnị mere nke ahụ ji bụrụ ihe amamihe dị na ya? O di nma, obu 2019. Oge ae buru n’amụma na otu onye (yabụ na ihe niile ahụ si ‘n’adịghị anwụ’ na-edegharị echiche anyị na DNA anyị, ruo n’anyị ga-etinye obi anyị n’ime ụmara) bụ ya mere ọ bụ naanị afọ 26 site n’oge ọgụgụ. Ọ bụ ya kacha mma na obere oge ma yabụ ọ ga-emetụta gị na ụmụ gị.
Lees ebe a ihe kpatara usoro ndị uwe ojii ọhụrụ sitere na Yolanthe Cabau nwere aha DNA na-enyekwa aka n’ịkwadebe ndị mmadụ maka nnabata data DNA mba, nke mere na igwe mmadụ ga-anọ n'igwe ojii n'oge na-adịghị anya na enwere ike idegharị DNA.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: maxvandaag.nl
Tags: ịka nká, mgbochi, David Sinclair, DNA, ruo mgbe ebighị ebi, agba, Harvard, kpara, ọgwụ, pil, Erere, megide, Erere rejuvenation, nká, usoro ịka nká, Yolanthe Cabau
M na-atụpu okpu Martin Vrijland maka nke a…
" Yolanthe Cabau na usoro ndị uwe ojii, DNA, ọmarịcha John de Mol mmepụta (dịka ozi ANP)
Ndi nzuzu dika gi? »
Nleta nile: 12.362.506
Tụlee op Kpọ oku ngwa ngwa! Anyị ga-ewepụla usoro mgbasa ozi n'ọrụ ugbu a!
SalmonInClick op Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersma na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'okpueze okpueze'?